Ny herin'ny masoandro dia mandrehitra ny jiro sy ny fanapoahana isolatoran'ny tafo tampoka
Nisy tranga afo maromaro tany New South Wales tamin'ny herinandro lasa teo izay nahatafiditra ny herin'ny masoandro - ary farafahakeliny roa no heverina fa vokatry ny famindran'ireo mpampisaraka tampon-trano. Omaly, Fire and Rescue New South Wales dia nitatitra fa nanatrika tranga iray tao amin'ny trano iray tany Woongarrah ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-24
Ny milina noforonina tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny vatan'olombelona. Izy io dia manana rafitra fiarovan-tena miaro tena sy manamboatra tena. Na io rafitra tena manan-tsaina io aza dia mila fanamboarana sy fikolokoloana tsindraindray. Ary toy izany koa ny rafitra noforonin'olombelona rehetra, ao anatin'izany ny fametrahana ny masoandro solar. Ao anatin'ny solar inst ...
Ny rafitra herinaratra amin'ny herin'ny masoandro an-trano dia mitaky singa hamokarana herinaratra, hanova herinaratra ho lasa alternating ankehitriny izay azo ampiasain'ny fitaovana ao an-trano, mitahiry herinaratra be loatra ary mitazona fiarovana. Solar Panels Solar panels dia t ...
Nanazava photovoltaics sy herinaratra i Solar
Ny sela Photovoltaic dia mamadika ny tara-pahazavana ho lasa herinaratra Ny sela photovoltaic (PV), izay matetika antsoina hoe sela solar, dia fitaovana tsy mekanika izay mamadika mivantana ny tara-pahazavana ho herinaratra. Ny sela PV sasany dia afaka mamadika hazavana artifisialy ho herinaratra. Saripika mitondra angovo avy amin'ny masoandro Ny hazavan'ny masoandro dia misy ...
Fa maninona ianao no tokony handeha photovoltaics?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-25
Ny teny hoe photovoltaics (PV) dia noresahina voalohany tamin'ny taona 1890, ary avy amin'ny teny grika hoe: sary, 'phos', midika hoe hazavana ary 'volt', izay manondro herinaratra. Photovoltaic, noho izany, dia midika herinaratra jiro, mamaritra ny fomba fiasan'ny fitaovana sy ny fitaovana photovoltaic. Photovoltaic ...
Inona no atao hoe photovotaics?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-19
Photovoltaics dia ny fanovana mivantana ny jiro ho herinaratra amin'ny ambaratonga atomika. Ny fitaovana sasany dia mampiseho ny fananana fantatra amin'ny hoe effet photoelectric izay mahatonga azy ireo hifoka foton-jiro sy hamoaka elektron. Rehefa voasambotra ireo elektrônika maimaimpoana ireo dia ...